မ၀င်းမော်ဦး အမှတ်တရ ~ Nge Naing
Saturday, September 17, 2011 Nge Naing 30 comments
အာဇာနည်''မ၀င်းမော်ဦး" ကို အဖ ဦးဝင်းကြု၊အမိ ဒေါ်ခင်ဌေးဝင်း တို့မှ ၁၉၇၂- ခုနှစ်၊နိုဝင်ဘာ( ၁၉ )ရက် ၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ.တွင် မွေးဖွားခဲ့ပြီး မွေးချင်း ၆ယောက်တွင် သမိး အကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ သူမ၏ ဇာတိမှာ ကြည့်မြင်တိုင်မြို.နယ် ၊ ပန်းပင်ကြီးလမ်းတွင် နေထိုင်ခဲ့ပြီး၊ အမှတ်(၄) အလယ်တန်းကျောင်း။ ကြည့်မြင်တိုင်မြို.နယ်တွင် (၈)တန်း ပညာသင်ကြားရင်း ၁၉၈၈ ဒီမိုကရေစီ တိုက်ပွဲကာလ အတွင်းမှာ ဖွဲ့စည်းသည့် ကျောင်းသားသမဂ္ဂ တွင်တက်ကြွ စွာပါဝင်ခဲ့ပြီး ကျရာတာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ၁၉၈၈ ခုနှစ် ၊စက်တင်ဘာလ ၁၉ရက်နေ. ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲဝင် ကျောင်းသားထုနှင့်အတူ မိမိကျောင်း၏ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ဆိုင်းဘုတ်အောက်တွင် ''ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း" ဓါတ်ပုံ ကိုင်ဆောင်ပြီး စိတ်ဓါတ်တက်ကြွစွာ ချီတက်ဆန္ဒပြ ခဲ.သည်။ (ဗိုလ်ချုပ်ပုံကို ကိုင်ထားရင်း ကျည်ဆံ ထိမှန်ပြီး ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်.
ထိုအချိန် ဆူးလေဘုရားလမ်းနှင့် ကုန်သည်လမ်းထောင့် အရောက် အဏာပိုင် တို့၏ ပြစ်ခတ်မှုကြောင့် သူမ၏ခြေသလုံး(ဘယ်)၊ ပေါင်(ဘယ်)တို့ ကျည်ဆန်မှန်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန် ကျောင်းနေဘက်တို့မှ ၀င်းမော်ဦး အား ၀ပ်နေရန် လှမ်းအော်သည့်အခါ ၊ဗိုလ်ချုပ်ပုံကိုင်ဆောင် ပြီး ဒူးထောက်နေသော ၀င်းမော်ဦးက ''မ၀ပ်ဘူး ငါဝပ်လိုက် ရင် ဗိုလ်ချုပ်ပုံ မြေခလိမ့်မယ်၊ ဗိုလ်ချုပ်ပုံမြေခရင် ငါတို့ ရှုံးတာပဲ''ဟု ပြန်အော်ခဲ့သေးသည်။ ထို့နောက်အာဏာပိုင်တို့၏ ဆက်လက် ပစ်ခတ်မှု တို့ကြောင့် ကြိုးစား ဒူးထောက်နေသော မ၀င်းမော်ဦး ၏ ညာဘက် လက်မောင်းဘေးမှ ဖေါက်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းထိ ကျည်ဆန်ဝင်ခဲ့သည်။ ၄င်းနေရာတွင်ပုန်းခိုနေရာမှ ကယ်ဆယ်ရေး ဆရာဝန်( ၂ )ဦး မှာနေ.လည် ၁၂း၃၀ နာရီ နှင့် ၀၁း၀၀ နာရီ လောက်မှ ကယ်ဆယ်ခွင့်ရခဲ့သည်။ ၄င်းကယ်ဆယ်ခဲ့သူ ခေါင်းဖက်မှမသူ ဆရာဝန်လောင်းကိုမင်းသိန်း အား "သမီးကို ကယ်ပါ" သူ.နှုတ်ခမ်းမှ ပြောဆိုသည့်စကားကို ကိုမင်းသိန်းမှ ပြောမှ သိခဲ့ရပါသည်။ ခြေရင်းမှမတာ ဆရာဝန်လောင်းကိုစောလွင် ဟုလည်းပြောပါသည်။
"မ၀င်းမော်ဦး" သည် ၁၉.၉.၈၈ -ခုနှစ် ညနေ ၅း၃၅ နာရီတွင် မြန်မာပြည်သူလူထု၏ ဒီမိုကရေစီရေးအတွက် ကိုယ်ကျိူးမဖက် အသက်ပေးလှူခဲ့ပါသည်။
(၁၉)ရက် (၉)လ (၁၉၈၈)ခုနှစ်က ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်မှ ကျဆုံးသွားခဲ့ရတဲ့.. မ၀င်းမော်ဦး နှစ်ပတ်လည်များအား အကြမ်းမဖက်အမျိုးသားလှုပ်ရှားသူများမှ တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်။ မ၀င်းမော်ဦးမိသားစုသည် တချိန်က ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်တွင် နေထိုင်ခဲ့ပြီး အာဏာပိုင်တို့၏ အနှောက်အယှက် ပေးခဲ့မှုကြောင့် မိသားစုများ ဒုက္ခရောက်ပြီး မိသားစုလိုက် လှိုင်သာယာသို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ရပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ အကြမ်းမဖက်အမျိုးသားလှုပ်ရှားသူများမှ မဝင်းမော်ဦး မိသားစုအား လေ့လာချက်အရ အထက်ပါ.. အိမ်ကလေးတွင် လူအမြောက်အများ ဆင်းရဲနွမ်းပါးစွာ နေထိုင်နေကြရပါသည်။ ထိုကြောင့် မ၀င်းမော်ဦး နှစ်ပတ်လည် ကျင်းပရန်လဲ ခက်ခဲခဲ့ပါသည်။ နောက်ပိုင်းနှစ်များအား ကျွန်တော်တို့ အကြမ်းမဖက်အမျိုးသားလှုပ်ရှား သူများမှ ဖိတ်စာမှစပြီး တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ခဲ့ရသည်။ မ၀င်းမော်ဦး၏ တိုင်းပြည်နှင့်လူမျိုးအတွက် စွန့်လွှတ် အနစ်နာခံခဲ့မှုအား အသိအမှတ် ပြုသူများအနေဖြင့် အာဇာနည် ကျောင်းသူ မ၀င်းမော်ဦး၏ နှစ်ပတ်လည် နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ဖြစ်မြောက်ရေးအား ၀ိုင်းဝန်းကူညီကြပါရန် ... ကျွန်တော်တို့ အကြမ်းမဖက်အမျိုးသားလှုပ်ရှားသူများမှ အလေးအနက် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ blue.peaceforu@gmail.com , babagyi67@gmail.com skype-shwekyaungtharr 0044-07915157660 shwekyaungtharr@gmail.com သို့ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။
ပုံပြင်မဟုတ် ဒဏ္ဍာရီမဟုတ် လုပ်ကြံဖန်တီးထားတဲ့ ပုံမဟုတ်ပါ။ ရှစ်ဆယ့်ရှစ်မှာ စစ်တပ်က တကယ်ပစ်သတ်ခံရလုိ့ တကယ်သွေးမြေကျခဲ့တဲ့ ကျောင်းသူစစ်စစ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပို့စ်ကို ဒီမိုဝေယံ ဘလော့ဂ်မှ ကူးယူဖေါ်ပြထားပြီး သူမတကယ်ကျဆုံးခဲ့တဲ့ ၁၉ ရက်နေ့ကျမှ ကိုယ်တိုင်ရေးတဲ့ ၀မ်းနည်းကြောင်း ဂုဏ်ပြု အမှတ်တရဆောင်းပါးတင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ (9/17/10 9:22 PM မှာ တင်တဲ့ပို့စ်ကို အပေါ်ခဏ ပြန်တင်ထားပါတယ်။)
မ၀င်းမော်ဦးနဲ့ အဲဒီတုန်းက ကျဆုံးခဲ့ရတဲ့ အာဇာနည်များအားလုံး ကောင်းရာသုဂတိလားကြပါစေ။
Posted in: ဂုဏ်ပြုအမှတ်တရ,ဓါတ်ပုံ
September 17, 2010 at 9:55 PM Reply
မဝင်းမော်ဦး ကောင်းရာမွန်ရာဘ၀ ရောက်နေ မှာပါ
September 17, 2010 at 10:39 PM Reply
September 17, 2010 at 11:41 PM Reply
ခြင်္သေ့တို့လက်ထက်မှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံတောင်မှ ကျောင်းမှာ တွေ့ဖူးမှာမဟုတ်တော့ အာဇာနည်အကြောင်းလည်း သင်ရမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒီတော့ အာဇာနည်ဆိုတာ ဘာကိုခေါ်လဲလို့ မသိတာ မဆန်းပါဘူး။ ကျောင်းမှာ မသင်ရလည်း အခုကိုယ့်ဖါသာကိုယ် လေ့လာလို့ ရပါတယ်။ အရင်နှစ်က တင်တဲ့ အာဇာနည်နေ့ပို့စ်တွေကို ပြန်ရှာဖတ်ကြည့်ပါ။ ခြင်္သေ့တို့ခေတ်မှာ ရှိတဲ့သူပုန်တွေ အားလုံးက ဒီမိုကရေစီအရေးနဲ့ တိုင်းရင်းသား ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်အတွက် တိုက်ပွဲဝင်တဲ့ သူပုန်တွေပဲ ဖြစ်လို့ သူပုန်နဲ့ တိုက်ပွဲဝင်ရင်း ကျဆုံးသွားတဲ့ စစ်သားတွေက အာဇာနည်တွေ မဟုတ်ကြဘူး။ စစ်အုပ်စုဟာ ပြဿနာကို နိုင်ငံရေးအရ မဖြေရှင်းဘဲ ဘယ်သူသေသေ ငတေမာရင်ပြီးဆိုတဲ့ သဘောနဲ့ အသုံးချခံလိုက်ရတဲ့ သနားစရာစစ်သည်တွေသာ ဖြစ်ပါတယ်။ အာဏာရှင်စနစ် မချုပ်ငြိမ်းသရွေ့ ဒီလိုအရေးအခင်းတွေကို မမြင်ချင်လည်း မြင်နေရဦးမှာပဲ ဖြစ်တယ်။
September 18, 2010 at 12:09 AM Reply
ခင်္သေ့တို့ခေတ်မှာ ရှိတဲ့သူပုန်တွေ အားလုံးက ဒီမိုကရေစီအရေးနဲ့ တိုင်းရင်းသား ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်အတွက် တိုက်ပွဲဝင်တဲ့ သူပုန်တွေပဲ ဖြစ်လို့ သူပုန်နဲ့ တိုက်ပွဲဝင်ရင်း ကျဆုံးသွားတဲ့ စစ်သားတွေက အာဇာနည်တွေ မဟုတ်ကြဘူး..ဆိုတော့အဲဒီသူပုန်တွေပဲကျွန်တော်တို့ရွာတွေကိုဝင်ဆီးပြီး လူတွေသတ်သွားတာမျက်စိအခုထိတော့မထွက်သေးဘူး.ငယ်ငယ်ကအဖြစ်ပျက်ပါ။အခုတော့အေးချမ်းနေပြီ။အဲလိုရွာတွေထဲဝင်ပြီးဆက်ကြေးကောက်။လူသတ်တဲ့သူပုန်တွေသေတာကောအာဇာနည်လို့ခေါ်မလား။ကျွန်တော်ကတော့သူပုန်တွေကိုမုန်းတယ်။အသဲထဲနှလုံးသားထဲစွဲနစ်အောင်မုန်းတာ။ကျွန်တော်တို့ခြံကလိမ်မော်ပင်တွေအကုန်ခုတ်သွားတယ်။တခြားအိမ်တွေမီးရို့ခံရတယ်။လူတွေသတ်သွားတယ်၊မိန်းမတွေခေါ်သွားတယ်မုန်းတယ်။သူပုန်မှန်သမျှအကုန်မုန်းတယ်။အမျိုးရေးတိုက်ပွဲဝင်နေတယ်ပြောပြီးလုပ်ချင်ရာလုပ်နေလို့။အခုတော့နားအေးပါးအေးနေလို့ရလို့စိတ်ချမ်းသာတယ်။
September 18, 2010 at 4:21 AM Reply
ခြင်္သေ့တို့ခေတ်မှာ ရှိတဲ့သူပုန်တွေ အားလုံးက ဒီမိုကရေစီအရေးနဲ့ တိုင်းရင်းသား ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်အတွက် တိုက်ပွဲဝင်တဲ့ သူပုန်တွေပဲ ဖြစ်လို့ သူပုန်နဲ့ တိုက်ပွဲဝင်ရင်း ကျဆုံးသွားတဲ့ စစ်သားတွေက အာဇာနည်တွေ မဟုတ်ကြဘူး။
ဗိုလ်မှူးခင်ကယ်ပါ။ဗိုလ်ပီတာကယ်ပါ ။ အဲ နေအုံး တရုပ်ဖြူနဲ့ တိုက်ရင်းသူရဘွဲ့ ရထားတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းတင်ဦးကယ်ပါ
မိတ္ထီလာမှာကရင်နဲ့ တိုက်လာရတဲ့ ဗိုလ်မှူးအောင်ရွှေကယ်ပါ
မြင်းခြံမှာ ကွန်မြူနစ်သတ်ခါနီးဖေါက်ထွက်လာရတဲ့ဗိုလ်မှူးချစ်ခိုင်ကယ်ပါ
ကရင်အမျိုးသားရဲဘော်များဖြစ်တဲ့ အောင်ဆန်းသူရိယစောဘရီနဲ့ စောမြင့်ကယ်ပါ။
တော်လှန်ရေးတလျှောက်မသေခဲ့ဘဲ ရထားမိုင်းခွဲခံရတော့မှ ပစ္စတိုလေးတလက်နဲ့ခံပစ်ရင်းသေခဲ့ရတဲ့ ဗိုလ်မှူးခင်မောင်ချစ်ကယ်ပါ ။
မိမိတပ်နဲ့မိမိတပ်မှူးလွတ်ရေးအတွက် ဘရင်းတလက်နဲ့ကာပစ်ပေးခဲ့တဲ့ တပ်သားအောင်ဆန်းသူရိယလှသောင်းကယ်ပါ
အင်းစိန်စစ်မျက်နှာမှာ ကျခဲ့ရတဲ့ ဗိုလ်မှူးသူရလှသောင်းကယ်ပါ ။
မိုးကြိုးခံစစ်သားကောင်းကြီးဗိုလ်မှူးကျော်သောင်း ( ဒေါ်ခင်နှင်းယုယောက်ျား)ကယ်ပါ
September 18, 2010 at 4:42 AM Reply
ပြန်ပြင်ပေးပါ မငယ်။(ကျောင်းသူလေး ၀င်းမော်ဦးရဲ့ ရှေ့ကနေ ခြေထောက်ကို ဆွဲ မ ထားတဲ့ ဆရာဝန်ရဲ့ နာမည်က ဒေါက်တာစောလွင်၊ ခေါင်းဘက်ကနေ မ ထား တဲ့ ဆရာဝန်က ဒေါက်တာမင်းသိန်းဖြစ်ပါတယ်။)
September 18, 2010 at 4:49 AM Reply
မိုးနဲ ကွန်ကီးကိုလူလုတာကြောင့် အဲလေ
ဒီမလေ နှမမယ်အချော်ရဲ့ 
ခမ်းဘုခိုးဟိုးဆေးတဲ့မင်္ဂလာဒုံမြေ
၄၈ ဇန်န၀ါရီက လွတ်လပ်ခါတိုင်းပြည်နုပြန်တော့
ဖားအံမြေ ရှမ်းပြည်တကြောနဲ့ 
ငါ့ရဲဘော် ဒိုဘာသာ မင်းအသံကြားရင်လ
သေခါသာ ၂ခါပြန်ခွိချင်မို့ 
ဖွါးပါတဲ့ဘွားငယ်နိုင် ။
အပြောမချို အအိုပေါရယ်လို့ 
မယ်နှမကိုတော့ မသမုတ်ချင် ။
ထားဝယ်မြေ တကယ်ဖွါးပါတဲ့ 
တိုင်းပြည်အေးစေဘို့ ရယ်လို့ 
လိုက်ခဲ့ရ ဘီအိုင်အေ ။
ပျဉ်းမနားတဲ့စစ်နယ်မြေ
ဗိုလ်ချုပ်ခေါ်သံ အမိန့် ကိုရင်ဝယ်ပိုက်ပါလို့ 
ပါးကိုသာ နာနာရိုက်တာက ရွှေဂျပန်
ဖြစ်ပြန်ရ မီနာရစ်ရှခန်းနဲ့ 
အဖဗိုလ်ချုပ် သြဇာခံလို့ 
လုပ်ပြန်ရ ပြည်သူ့ ရဲဘော်
မအေးပြန် ကရင်ထပါလို့ 
ဒုရင်းမှူးတဲ့ရာထူးကြီး
ဂေါ်ဇီလာ အတော်လာ မထင်လိုက်ပါနဲ့ 
ရိုင်ဖယ်ဆို ဟင်းချက်စရာထင်တာ ၄၀၀ကျော်လောက်ပါဘဲ
မြို့အေးဘို့ တဲ့ တောကိုနင်း
ခြုံတခို ကရင်ကျည် ကျုပ်ကိုသင့်ပြန်တေ့ာ
ပေးခဲ့ ရ ကျုပ်အသက်
အေးစေဘို့ကိုယ့်တိုင်းပြည်
September 18, 2010 at 5:59 AM Reply
(၁၉-၉-၀၉ဟု တနေရာတွင် မှားရေးထားသည်ကို ပြင်ပေးပါ)
ရင်နာစရာ မဟာအိုင်ဒီယာတွေပဲ။ တိုင်းပြည်တာဝန်ထမ်းရင်း ကျဆုံးသွားတဲ့ စစ်သားတွေက သနားစရာ သက်သက် ဟုတ်စ။
အင်အယ်ဒီ က သူရဦးတင်ဦးကြီး ဦးအောင်ရွှေကြီး ကယ်ပါဗျာ။ တရုတ်ဖြူ နဲ့တိုက်တုန်းက တိုက်ပြီး ခုအဘတို့ သဘောတရားချပေးခဲ့ရတဲ့ သမီးသာသာအရွယ်တွေက ဘကြီးတို့ လုပ်သမျှ ခွေးဖြစ်အောင် ပြောနေပြီ။ ခင်ဗျားတို့ ဘယ်တိုက်ပွဲက ဘယ်လို ဆိုတာ နားမလည်ရင် ပါးစပ်ပိတ်ထားပါဗျာ။ မဟာအိုင်ဒီယာမှာ စစ်တပ်ဟာ ရန်သူဆိုတဲ့ အတွေးကို ဖျောက်ထားစမ်းပါ။ စစ်တပ်မပါဘဲ ခင်ဗျားတို့ ဘာမှ လုပ်မရပါဘူး။ ဒါရှင်းနေတာပဲ။ မယုံလို့ တနေ့ဒီမိုကရေစီရလို့ ခင်ဗျားတို့ နိုင်ငံကို အုပ်ချုပ်ခွင့်ရရင် တပ်မတော်ဆိုတာကို ဆက်မထားနဲ့ပေါ့ဗျာ။ စစ်တပ်မပါဘဲ နိုင်ငံတော်ကို အုပ်ချုပ်ကြပေါ့။ သေချာတာတစ်ခုကတော့ တပ်မတော်က ခင်ဗျားတို့ကို မယုံကြည်လာဘဲ ခင်ဗျားတို့နောက်ကို မလိုက်ဘဲ ခင်ဗျားတို့ တိုက်ပွဲ ဆယ်ပုံတစ်ပုံတောင် အောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူး။ သူပုန်ထတယ်ဆိုတာတောင် စစ်တပ်က တစ်ဝက်ပါတယ် ဘလော့ရှင်။ ခင်ဗျားတို့ မြတ်နိုးတဲ့ ၈၈ ဆိုတာလည်း စစ်တပ်က အထိုက်အလျောက် ပါခဲ့လို့ အောင်မြင်တာ။ ခု ခင်ဗျားတို့ရဲ့ စည်းရုံးပုံက ဒီလိုတဲ့လား။ အငတ်ခံ အပြတ်ခံ အသေခံပြီး တိုင်းပြည်အေးချမ်းအောင် တိုက်လာတဲ့ ကိုကျော်သောင်း၊ ကိုကျော်ဇောတို့ ကိုမောင်မောင်တို့ ရေ... ခုခေတ် မအောင်မြင်နိုင်တဲ့၊ အောင်မြင်ဖွယ်ရာ စည်းရုံးမှုနဲ့ အမြင် တစ်စက်မှ မရှိတော့တဲ့ အက်တီးဗစ်တွေရဲ့ သောက်ပြောကို ထကြည့်ကြပါဦးဗျာ...။
September 18, 2010 at 4:21 PM Reply
ကိုအိုးဝေ နေ့စွဲမှားနေတာကို ပြင်လိုက်ပြီးပြီ။ ဆရာဝန်နှစ်ယောက်ကျတော့ ဒီပို့စ်ထဲမှာ ရေးထားတာနဲ့ ကိုအိုးဝေပြောတာ ဆေးကျောင်းသားနဲ့ ဆရာဝန် ကွာတာကလွဲလို့ တခြား ဘာမှမကွာတာကို တွေ့ရတယ်။ ဒါကြောင့် သူ့မူရင်းပို့စ်မှာ ရေးထားတဲ့အတိုင်းပဲ ဆက်ထားလိုက်ပါတယ်။ ဒီပို့စ်က လာလည်တဲ့သူတွေလည်း ဖတ်လို့ရအောင် ဘလော့ဂ်မှာ သိမ်းထားချင်လို့ကိုဒီမိုပို့စ်ကို ပြန်ဖေါ်ပြထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ခြင်္သေ့ရေ ခြင်္သေ့တို့ လက်ခံသည်ဖြစ်စေ လက်မခံသည်ဖြစ်စေ၊ မ၀င်းမော်ဦးက သူ့ကိုယ်ကျိုးအတွက် ဘာမှမပါဘဲ အများအတွက် မိမိအသက်ကို ပဓာန မထားဘဲ သေရင်သေပါစေ ဆိုတဲ့ပေးဆပ်မှုနဲ့ တိုက်ပွဲဝင်ရင်း ပစ်သတ်ခံရတာ ဖြစ်လို့ အာဇာနည် အစစ်အမှန် ဖြစ်ပါတယ်။ ဆူပူသူမဟုတ် မိမိဆန္ဒကို မိမိ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဗိုလ်ချုပ်ပုံကိုင်ပြီး ၈၈ မှာ အဖြူအစိမ်းဝတ်ပြီး ဆန္ဒပြနေတဲ့ ငယ်ရွယ်နုပျိုတဲ့ အခြေခံပညာ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ ဒီလိုပစ်သတ်ခံရတယ်ဆိုတာ သက်သေအထောက်အထားလည်း ဖြစ်တယ်။ နောက်တခုက ခြင်္သေ့တို့ သူပုန်ပေးတဲ့ ဒုက္ခတွေကို ခံစားခဲ့ရတယ်ဆိုလို့ တကယ်ကို စိတ်မကောင်းဖြစ်ပါတယ်။ စစ်တပ်က မြို့ပေါ်ကျေးလက် အကုန်လုံး တခြားဒေသတွေမှာ ဒုက္ခပေးတာလည်း ဒီထက် အဆတရာမကပါဘူး။ ဒီဒုက္ခတွေက ပြည်တွင်းစစ်ကြောင့် ဖြစ်ရပြီး ပြည်တွင်းစစ် ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာနဲ့ စစ်အာဏာရှင်စနစ် သက်ဆိုးရှည်နေသ၍ ဒီကိစ္စတွေ မငြိမ်းဘူးဆိုတာ လေ့လာသင့်ပါတယ်။
Ahmyinhman နဲ့ Horizontal - ခြင်္သေ့ကို ကျွန်မ ပြောလိုက်တဲ့ ((((ခြင်္သေ့တို့ခေတ်မှာ ရှိတဲ့သူပုန်တွေ အားလုံးက ဒီမိုကရေစီအရေးနဲ့ တိုင်းရင်းသား ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်အတွက် တိုက်ပွဲဝင်တဲ့ သူပုန်တွေပဲ ဖြစ်လို့ သူပုန်နဲ့ တိုက်ပွဲဝင်ရင်း ကျဆုံးသွားတဲ့ စစ်သားတွေက အာဇာနည်တွေ မဟုတ်ကြဘူး။ စစ်အုပ်စုဟာ ပြဿနာကို နိုင်ငံရေးအရ မဖြေရှင်းဘဲ ဘယ်သူသေသေ ငတေမာရင်ပြီးဆိုတဲ့ သဘောနဲ့ အသုံးချခံလိုက်ရတဲ့ သနားစရာစစ်သည်တွေသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ))))) ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ၀မ်းနည်းပက်လက် ဖြစ်နေကြတဲ့အတွက် စိတ်မကောင်းပါဘူး။ ဒီလောက်လည်း ၀မ်းနည်းပက်လက်ဖြစ်ပြီး မခံစားနေကြပါနဲ့။ ကျွန်မ ရှင်းပြတာကို သေသေချာချာ နားထောင်လိုက်ရင် ရှင်းသွားလိမ့်မယ်။ ဒီဘလော့ဂ်မှာ စာလာဖတ်နေတဲ့ ခြင်္သေ့ဆိုတာ အသက်သုံးဆယ်တောင် မပြည့်သေးတဲ့ လူငယ်တယောက်သာ ဖြစ်တယ်။ ရှင်တို့ပြောတဲ့ ခေတ်က ခြင်္သေ့မပြောနဲ့ ကျွန်မကိုတောင် မမွေးသေးပါဘူး။ ကုန်ကုန်ပြောလိုက်မယ် ရှင်တို့ပြောတဲ့ခေတ်က အသက်စွန့်ပြီး တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ သူရဲကောင်းတွေအထဲမှာ ကျွန်မအဖေလည်း ပါတယ်ရှင့်.. ကျွန်မအဖေက ဟိုတုန်းက ဗမာ့သေနတ်ကိုင်တပ်ရင်း (၇) က။ သူတပ်ကြပ်ကြီးအဖြစ် ဦးဆောင်ပြီး တိုက်ခဲ့တဲ့ တိုက်ပွဲတခုမှာ သူ့အပေါ်က ဗိုလ်က သီဟသူရဘွဲ့ရသွားခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ လူမဖြစ်သေးတဲ့အချိန်ကပေါ့။ အဲဒီခေတ်က စစ်တပ်ကို ပြည်သူလူထုက သိပ်ချစ်တာ။ ကြွားတာမဟုတ်ဘူး တကယ်ပြောတာ။
ခြင်္သေ့ကို ကျွန်မ ပြောတဲ့ သနားတယ်ဆိုတာ ကျွန်မတုိ့ သူပုန်ဘ၀တုန်းက ကျွန်မတို့နဲ့ တိုက်ပွဲဖြစ်ရင်း ကျသွားတဲ့ စစ်သားတွေကို ရည်ညွန်းပါတယ်။ ခြင်္သေ့ကလည်း အဲဒီခေတ်က စစ်သားတွေကိုပဲ ရည်ညွန်းပါတယ်။ ရန်သူသေလို့ ပျော်တဲ့သူက ပိုများပါတယ်။ ကျွန်မလို မပျော်ဘဲ သနားတာကိုတောင် ရှင်တို့က ကျေးဇူးတင်ရဦးမယ်။
ဒီတော့ ခြင်္သေ့တို့ခေတ်လို့ ပြောလိုက်တာဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် လေးငါးဆယ်ခေတ်က တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ ဘာမှ မပတ်သက်ဘူးဆိုတာ မြန်မာစာကို ကောင်းကောင်း နားလည်ရင် သိနိုင်ပါတယ်။ ခြင်္သေ့ကို အသက် ၇၀/၈၀ ခန့်ထင်နေရာကနေ အခု ခြင်္သေ့က လူငယ်တယောက်ဆိုတာ သိပြီဆိုတော့ ရှင်တို့ လာပြီး ရွဲ့လိုက်စောင်းလိုက် လုပ်ထားပြီး ကျွန်မကို လာပြီး တရားခံလာဆွဲထည့်နေတဲ့ မကောင်းကြံလေးတွေကို ကိုယ့်ဖါသာကိုယ်ပဲ ပြန်ယူသွားကြတော့။ စောင်းသလိုလို ရွဲ့သလိုလို လာလုပ်လို့ ကျွန်မ နားလည်းနားမလည်ဘူး၊ ပြန်ရွဲ့လို့လည်းမတတ် စောင်းလို့လည်းမတတ်ဘူး တည့်တည့်ပဲ ပြောလို့တတ်ပြီး တည့်တည့်ပြောမှပဲ နားလည်ပါတယ်။ နောက်ထပ် စာလာဖတ်လို့ မှားနေတယ်ထင်တာကို မင်းပြောတာ တကယ်လုပ်လာတဲ့ ဒီလူတွေ ကို စော်ကားရာ ရောက်နေတယ် ဒါမျိုး မပြောသင့်ဘူးလို့ တည့်တည့်ပဲ ထောက်ပြဟုတ်ပြီလား။
September 18, 2010 at 4:54 PM Reply
ရှင်တို့ပြောတဲ့ခေတ်က အသက်စွန့်ပြီး တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ သူရဲကောင်းတွေအထဲမှာ ကျွန်မအဖေလည်း ပါတယ်ရှင့်..
တခုခုကို ပြောလာရင် အချက်အလက်နဲ့ ပြန်မပြောဘဲ personal ပါအောင်ပြောနိုင်တဲ့ဘွားငယ်နိုင်ရဲ့ အရည်အချင်းကို။ဒီအရည်အချင်းက မွေးရာပါလား။လေ့ကျင့်ယူတာလားဗျ။
ကောင်းပြီလေ တည့်တည့်ပြောဆိုတော့လဲ ပြောရတော့တာပေါ့
လူဆိုတာက ဘာလုပ်လုပ်ရည်မှန်းချက်ဆိုတာ ရှိရတယ် ။ ခု မင်းတို့ ဘလော့ထောင်နေတာ ဘာကိုရည်မှန်းတာလဲ ။ ဗမာပြည်ကိုကောင်းစေချင်တာဆိုရင်တော့ ခုလုပ်နေပုံနဲ့ဝေးစွ ၆ပါးဘဲ ။
အပေါ်မှာ Horizontal ထောက်ပြတာကိုသေချာမဖတ်ဘဲ နှုတ်သီးကောင်းရန်တွေ့ လုပ်နေတာကိုက အသုံမကျတာပြနေတာ ။ အခုပြဿနာကို လွတ်ချင်ရင်မင်းတို့ မှာ ၂လမ်းဘဲရှိတယ် ။
၁လမ်းက ခုလက်ရှိတပ်ကို ဖြိုနိုင်လောက်တဲ့စင်ပြိုင်တပ်တခုကိုထောင် ။ ဒီလမ်းကိုလိုက်နိုင်လောက်တဲ့ လူ မင်းတို့ ထဲမှာ တယောက်မှမမြင်ဘူး ။ဟိုးထိပ်ကေါ်စုကစလို့မင်းတို့ ထိ ။ နောက်ပေါက်ထဲက လူစွမ်းကောင်းပေါ်ရင်တော့ မသိဘူး
လမ်း၂က လက်ရှိတပ်ကို စည်းရုံးယူ ။ အဲလိုစည်းရုံးဆိုတဲ့နေရာမှာ ငါတို့ က သူပုန်အမွေဆက်ခံသူ။ မင်းတို့ တပ်က သနားစရာအမှားတွေဘဲဆိုတဲ့ လေနဲ့သွားပြောလို့ ကတော့ ဟိုကတပ်ထဲကလူတွေ မင်းတို့ ဘက်ပါဘို့ ကတော့ ဒိတသက်မပြောနဲ့ နောက် အသင်္ချေယကပ်ဆုံးတောင်မမျှော်နဲ့ 
တခုခုဆိုရင် မနှဲလေး ဘဲဥလုခံရသလို ကက်ကက်ကက်ကက်ပြန်ရန်တွေ့ ဘို့ ထက် ငါဘာတွေပြင်သင့်သလဲဆိုတာ အရင်စဉ်းစား
September 18, 2010 at 5:03 PM Reply
Ahmyinhman - မင်းတို့လို့ မပြောပါနဲ့ ငါတို့လို့ ပြောပါ။ ဒီနိုင်ငံမှာ မွေးဖွားကြီးပြင်းတဲ့သူတွေထဲမှာ ရှင်လည်း ပါတယ်မဟုတ်လား အဲဒီတော့ ရှင့်မှာလည်း တာဝန်ရှိပါတယ်တယ်။ ကျွန်မလည်း ကျွန်မလုပ်နိုင်တာပဲ ကျွန်မလုပ်တယ်။ ကျွန်မဘလော့ဂ်ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ဘလော့ဂ်ထဲဝင်ဝင်ချင်း ရေးထားပါတယ်။ မှတ်ချက်ပေးရင်ဖြစ်ဖြစ် ဘလေ့ဂ်တခုခုမှာ စာဖတ်ရင်ဖြစ်ဖြစ် ဘလော့ဂါဘာဆိုလိုတယ် ဘာရည်ရွယ်ချက် ရှိတယ်ဆိုတာ လေ့လာသင့်တယ်။ ကျွန်မဘလော့ဂ်က ဘ၀ဖြတ်သန်းမှု တွေ၊ လေ့လာမှတ်သားမှုတွေကို ရေးတဲ့ စိတ်အပန်းဖြေရာ မိသားစုဘလော့ဂ် သက်သက်ပါပဲ။ ရှင်တကယ် အကြံပေးချင်ရင် တကယ်ကိုယ်ဖိရင်ဖိ လုပ်နေတဲ့သူတွေကို သွားအကြံပြုပါ။ ကျွန်မက တချိန်က အချိန်ပြည့် ပါဝင်ခဲ့ပေမဲ့ အခုချိ်မှာ ဒီမိုကရေစီကို မြတ်နိုးသူ ထောက်ပံ့ကူညီအားပေးသူတယောက်အဖြစ်ပဲ နေရာယူနိုင်တယ်။
အခုချိ်မှာ ဒီမိုကရေစီကို မြတ်နိုးသူ ထောက်ပံ့ကူညီအားပေးသူတယောက်အဖြစ်ပဲ နေရာယူနိုင်တယ်။
အချိန်အားလို့ လေပန်းနေတဲ့လူတယောက်ဘဲပေါ့ ။
အမေစုတွေ အန်တီစုတွေ ဥိးထိပ်တင်နေသလိုလိုရေးထားတာတွေ့ လို့လူတယောက်ဟာ ကိုယ့်အမေတော့ ပစ်မထားလောက်ပါဘူလို့ယေဘူယျတွေးမိတဲ့ ကိုယ့်အမှားပါ ။
အားလို့ အော်ဇီထိုင် ဗမာပြည်အကြောင်း အာ နေတဲ့ သူကိုး ။
ဟုတ်ကဲ့ နောက်ကို အာရတီပါပါ ၀ိရတီပါပါပါဘဲ
ကျွန်မ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အမေစု အန်တီစုလို့ တခါမှ ယောင်လို့တောင်မခေါ်ဖူးဘူး။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နာမည်ပါအောင်ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လို့ခေါ်ပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့ လူငယ်ဘ၀တခုလုံးကို ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက် ပေးခဲ့ပြီးပြီ အခုလည်း အစိတ်အပိုင်းအနေနဲ့ ပေးနေဆဲပဲ။ ခုနက မေ့ကျန်ခဲ့လို့ ကျွန်မ ရေးတာကို သေသေချာချာ ဖတ်ပါ။ ရှင်တို့ ကျွန်မကို ဦးတင်ဦးတို့ ဦးအောင်ရွှေတို့ကို ဒီလိုပြောနေတယ်ဆိုပြီး တရားခံလာဆွဲထည့်တာ မအောင်မြင်လို့ ပေါက်ကရလျှောက်ပြောနေတယ် မဟုတ်လား။ ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက် ကျွန်မလောက် လုပ်နိုင်အောင်ပဲ ရှင်ကြိုးစားပါ။ ကျွန်မလောက် လုပ်နေတယ်ဆိုရင် ရှင့်ကို ကျွန်မ လေးစားမယ်။ သူများကို လိုက်သရော်တဲ့ အကျိုးမရှိတာ မလုပ်ပါနဲ့။ ကျွန်မကို လာသရော်လို့ ရှင်ဘာအကျိုးမှ မရသွားဘူး။ ကျွန်မ ကက်ကက်လန် ပြန်ပြောနေတာလည်း မဟုတ်ဘူး နှုတ်သီးကောင်းရှာပါး ပြောနေတာလည်း မဟုတ်ဘူး။ ရှင်ပြောသွားတာကိုပဲ အကျိုးနဲ့အကြောင်းနဲ့ ပြန်ပြောပြနေတာ ဖြစ်တယ်။ သူများကို တရားခံဆွဲထည့်ဖို့ ဘယ်တုန်းက အလစ်ချောင်းနေမှန်းမသိ ဆွဲထည့်လို့ မအောင်မြင်တော့ မကျေအနပ်ဖြစ်ပြီး ပေါက်ကရ လျှောက်ပြောမနေပါနဲ့။ ရှင်တို့ထက် Critical Thinking ရှိလို့ ခြင်္သေ့ကို တုံ့ပြန်တုန်းက ရှင်တို့လို လာပြောမည့်သူ ရှိမယ်ဆိုတာ အတိအကျသိလို့ ခြင်္သေ့တို့ခေတ်က စစ်သားတွေဆိုတာ မပါပါအောင် တမင်ထည့်လိုက်တာ ဖြစ်တယ်။ ဒါကို အမြင်ဘဲ ချောက်တွန်းဖို့ပဲ စဉ်းစားနေတာနဲ့ တန်းဝင်လာပြီး အခုပြန်ရှင်းပြလိုက်တော့ အကွက်ဆင်တာ မအောင်မြင်ဖြစ်သွားလို့ မကျေမနပ် ဖြစ်နေတယ် မဟုတ်လား။ ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုရင် သူများကို မကောင်းကြံရင် ကိုယ့်မှာ ပြန်ထိတတ်တယ်ဆိုတာ နားလည်သင့်တယ်။ တိုင်းပြည်ကို တကယ်ချစ်တဲ့ စစ်သားတွေကို အခုထိလည်း ကျွန်မ ချစ်ပါတယ်။ ကြားကနေ သွေးလာထိုးဖို့ မစဉ်းစားနဲ့။ အောင်မြင်မှာ မဟုတ်ဘူး။
September 18, 2010 at 8:31 PM Reply
ပဒေသရာဇ်ခေတ်မှာ စစ်တိုက်တဲ့အခါအလံကိုင်စစ်သည်(standard-bearer) တွေရှိခဲ့ပါတယ်။ ရှေ့တန်းမှာရဲရဲဝံ့ဝံ့ အလံကိုမကျအောင် ထိန်းသိမ်းကိုင်ဆောင်ရသူတွေပါ။ ဒါပေမယ့်သူတို့ဟာ စစ်သားတွေဖြစ်သလို သူတို့ရဲ့ ရဲစွမ်းသတ္တိနဲ့ အနစ်နာခံရတာကို တော်ရုံအသိအမှတ်ပြုမခံကြရပါဘူး။
လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်မဟုတ်ဘဲ အမှန်တကယ်ပစ်ခတ်နေတဲ့ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကို
ဲရဲရဲဝံ့ဝံ့ရင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ “မဝင်းမော်ဦး” လိုလူစားမျိုးကိုတော့ အာဇာနည်လို့အမည်နာမ မတပ်ရင်တောင် သူရဲကောင်းလို့ခေါ်ထိုက်ပါတယ်။ (သေနတ်သံမကြားဖူးသူတွေ အသံကြားရုံနဲ့ သွေးပျက်တာတွေအများကြီးပါ)။
သူပုန်ကိစ္စကတော့ အရှည်မပြောလိုပါဘူး။ ဒီကနေ့ကမ္ဘာမှာ အုပ်စိုးနေတဲ့အစိုးရအတော်များများဟာ တချိန်ကသူပုန်တွေပါပဲ။ သောင်းကျန်းသူဆိုတာလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်၊ ရှိလည်းရှိနေဆဲပါ။ လက်နက်ကိုင်ပြီးအစုအဖွဲ့နဲ့ဖြစ်လာရင် ဘယ်အဖွဲ့မဆို(တပ်မတော်နာမည်ခံထားတဲ့အဖွဲ့အပါအဝင်) သောင်းကျန်းသူဖြစ်လာဖို့ လက်တစ်လုံးလောက်တင်ရှိနေတတ်တာပါ။ တခါတရံမှာ စည်းကျော်သွားမိတတ်တာတွေရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တပ်မတော်နာမည်ခံပြီး ပြည်သူတွေအသက်အိုးအိမ်ကို ကာကွယ်ဖို့တရားဝင်နေရာရယူထားသူတွေက ပြောင်းပြန်လုပ်တာကတော့ မျက်ကွယ်ပြုဖို့အင်မတန်ခက်လှပါတယ်။
အချုပ်ကိုပြောရရင် ပြဿနာအဖြေက လူအများစုဆီမှာအဆင်သင့်ရှိကြပါတယ်၊ နေ့တိုင်းလည်းမြင်သိကြားနေကြရပါတယ်။ ဒါတွေကို တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေ၊ ပြောင်းလဲပြစ်လို့ရနိုင်တဲ့သူတွေက လက်မခံနိုင်၊ မကျင့်ကြံနိုင်လို့ ဒုက္ခတွေဆက်ဝေနေကြရတာပါ။ အဲဒီတာဝန်ရှိကြသူတွေ၊ ပြောင်းလဲပြစ်နိုင်တဲ့သူတွေကို သိချင်၊ မြင်ချင်ရင်တော့ မြားနောက်လိုက်မကြည့်ကြပါနဲ့။ မြားလာတဲ့ဆီကို ကြည့်ကြပါ။
September 19, 2010 at 10:00 PM Reply
ဒါဖြင့် ခြင်္သေ့ဆိုသူရဲ့ အသက်အရွယ်ကို ပြောထားလေ။ ခင်ဗျားတို့ ကိစ္စကို ကျုပ်က သိစရာလား။ အသက် သုံးဆယ်အောက်ဆိုရင် နေစမ်းပါဦး။ ၈၈ နောက်ပိုင်းကို ခင်ဗျားပြောနေတာဆိုရင် ဘယ်သူပုန်ကို ပြစရာ ရှိတော့လုိ့တုန်း။ ကျုပ်ဆိုလိုတာက ကြီးကြီးမားမား အားကြိုးမာန်တက် တိုက်ပြီး၊ နိုင်ငံတော်ကို ခြိမ်းခြောက်နိုင်တဲ့ သူပုန်။
ထားလိုက်တော့။ အကျယ်အကျယ် မငြိမ်းဖွယ် မဖြစ်အောင် အငြင်းမပွားတော့ဘူး။ ခင်ဗျားအဖေက စစ်သားဟောင်းကြီးဆိုရင် သူ့နိုင်ငံရေးအမြင် သူ့ခံစားချက်တွေကို လေ့လာ မေးစမ်းကြည့်ပေါ့။
ဒါပေမယ့် ခင်ဗျားတို့က ကိုယ့်အတွေးအမြင် ကိုယ့်စည်းစိမ် ကိုယ့်အခြေနဲ့ကိုယ် ပျော်နေကြပြီပဲ။ တစ်ဖက်သားရဲ့ အမြင်ကို လေ့လာတော့မယ် မထင်ပါဘူး။
September 19, 2010 at 10:17 PM Reply
Horizontal - ပို့စ်ရော အကြောင်းပြန်ထားတာကိုပါ သေချာစွာဖတ်ပြီးမှ မှတ်ချက်ကို ရေးစေချင်တယ်။ သူပုန်က ကျွန်မ ကိုယ်တိုင်ပဲ။ ကျွန်မတို့နဲ့ တိုက်ပွဲဝင်လို့ ရန်သူဘက်က ရဲဘော်တွေကျရင် ကျွန်မစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်၊ သနားတယ်။ ဒါပေမဲ့ အာဇာနည်အဖြစ် မသတ်မှတ်နိုင်ဘူး သူတို့က စစ်အုပ်စု အသုံးချခံရတာ ဖြစ်လို့ အာဇာနည်အဖြစ်တော့ မသတ်မှတ်နိုင်ဘူး။ ဒါရွဲ့ပြောတာလည်း မဟုတ်ဘူး စောင်းပြောတာလည်း မဟုတ်ဘူး တကယ်သနားလို့ သနားကြောင်းပြောတာဖြစ်တယ်။ ကျွန်မတို့ဘက်က ကျတဲ့သူတွေကိုကျတော့ အာဇာနည်အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး အခုထိ အလေးပြုနေပါတယ်။ ကျွန်မဘလော့ဂ်က ပိုစ်အဟောင်းတွေကို ပြန်ဖတ်ကြည့်ရင် ကျွန်မအဖေနဲ့ သဘောထားမတိုက်ဆိုင်တာတွေကို တွေ့ရလိမ့်မယ်။ ဒီမှာ ရှင်းပြဖို့ အချိ်န်မရှိဘူး သိချင်ရင် အချစ်မေတ္တာဆိုတဲ့ Label အောက်က ပျော်၍မရသော အမေနေ့အတွေး၊ ပျောက်ဆုံးနေသော မောင်လေးတယောက်၊ တခါက ကျွန်မရဲ့ဇာတ်လိုက် ဒီပို့စ်သုံးခုကို သွားဖတ်ကြည့်ပါ။ ဒါဆိုရင် ရှင်သိချင်တဲ့ ကျွန်မအဖေရဲ့ သဘောထားကို ရှင်တွေ့ရလိမ့်မယ်။ စာလာဖတ်တာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်မစာကို သဘောတူသည်ဖြစ်စေ၊ မတူသည်ဖြစ်စေ တယောက်ယောက်က ကျွန်မပေးတဲ့ message ကို ရသွားတာ ကျွန်မ၀မ်းသာပါတယ်။ ကျွန်မကို ဘယ်လိုပဲ ထင်ထင် တခါတလေကျတော့ ကိုယ်တောက်လျှောက် အမှန်လို့ လက်ခံထားတဲ့အရာတွေကလည်း အမှားဖြစ်နေတတ်တယ် မဟုတ်လား။ အဲဒီအချိန်ကျမှ ဘယ်တုန်းကတော့ ဘယ်သူက ဘာပြောဖူးတယ်ဆိုတာ ပြန်သတိရတတ်ပါတယ်။ ကျွန်မဘ၀မှာ ဒါမျိုး ခဏခဏ ကြုံရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်နဲ့ မတူသူတွေကို မုန်းတဲ့အကျင့်ပျောက်သွားအောင် ဒီအတွေ့အကြုံတွေက ကျွန်မကို သင်ပေးခဲ့လို့ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်ဘူး။ ကျွန်မနဲ့ သဘောထားမတိုက်ဆိုင်လို့ သက်သက်နဲ့ ကျွန်မ ဘယ်သူ့ကိုမှ မမုန်းတတ်ဘူး။ ကျွန်မကို ပြောချင်ရင် စောင်းလိုက်ရွဲ့လိုက်တော့လာမပြောနဲ့ ကျွန်မနားမလည်ဘူး။ သူများကိုလည်း ကျွန်မ တည့်တည့်ပဲ ပြောတတ်ပါတယ်။ စာလာဖတ်တာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မှတ်ချက်ရေးရင် စာကိုသေသေချာချာဖတ်ပြီး ရေးဖို့နဲ့ တည်တည်တံ့တံ့လေး ရေးဖို့တော့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ ပေါတောတောစာတွေ ကျွန်မလည်း မရေးတတ်ဘူး သူများရေးတာကိုလည်း လက်မခံတတ်ဘူး။
September 19, 2010 at 10:32 PM Reply
September 19, 2010 at 10:37 PM Reply
တခါတရံမှာတော့ ဒုံရင်းဒုံရင်းပြန်သွားနေတဲ့၊ ရင့်ကျက်ဖို့ရာ လောကကြီးကိုဘက်စုံမြင်လာဖို့ရာ၊ တာဝန်ယူတတ်သူတွေဖြစ်လာနိုင်ဖို့ရာကို ဒီအချိန်မှာဘယ်လိုမှပြောပြလို့ မထူးနိုင်သေးတဲ့သူတွေမြင်ရတာ စိတ်တော့အင်မတန်လေးပါတယ်။ မငယ်နိုင်ကတော့ သူနာပြုမို့လို့ စိတ်ရှည်တာတော်တော့တယ်လို့ ချီးကျူးရတော့မှာပဲ။
သတိပြုစရာတစ်ခုကတော့ အစီအစဉ်ချပြီး အာဏာရှင်တွေကို ဆန့်ကျင်တဲ့ဆိုဒ်တွေမှာ စိတ်ဒုက္ခရောက်ဖို့၊ အချိန်တွေချွေပစ်ဖို့ လုပ်နေတာတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုတော့ သတိလေးရှိစေချင်ပါတယ်။ troll, sock puppet, spamming နဲ့ multi-posting ပုံစံတွေနဲ့ လှည့်သုံးတတ်ကြပါတယ်။ virus, dos attack နဲ့ hacking တွေကတော့ နောက်တစ်ဆင့်ပေါ့။
ဒါပေမယ့် ဒီဘက်ခေတ်မှာ ဦးဏှောက်ဆေးခံထားရတဲ့ လူငယ်ကလေးတွေကိုမြင်ရင် စိတ်မသက်သာပေမယ့် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဖြတ်သန်းခဲ့ရတာဆိုတော့ အလွန်အကျွံမဖြစ်ကြရင် အပြစ်လည်းသိပ်မတင်ချင်ပြန်ဘူး။ တစ်နေ့တော့ သိလာကြမှာပါလို့ပဲ သဘောထားရတာပါပဲ။
တစ်ခါကျနော်ကိုယ်တိုင်လည်း ကိုယ့်အတွက်ဗဟုသုတမျက်စိဖွင့်ပေးမယ့် ဝီကီပီဒီယာလိုဆိုဒ်မျိုးကို တော်တော်လေးနောက်ကျမှတွေ့ခဲ့ရလို့ အင်တာနက်ပေါ်တက်သူတိုင်း အရာရာကိုသိနားလည်ရမယ်လို့ မျှော်လင့်လို့မရတာ သဘောပေါက်မိတယ်။
မြန်မာပြည်နဲပတ်သက်လို့ကတော့ ပြောစရာတွေများပေမယ့် လွယ်လွယ်ကူကူဆွေးနွေးလို့ရတဲ့ အခြေခံအချက်တွေလည်း အများကြီးပါ။ နိုင်ငံကိုဘာလို့ နိုင်ငံတော်ဆိုပြီးခေါ်ရတာလဲ၊ စစ်တပ်ကို ဘာလို့တပ်မတော်ဆိုပြီး ခေါ်ရတာလဲစသည်ဖြင့်ပေါ့လေ၊ တွေးစရာတွေပါပဲ။ ဒါ့ပြင် ငယ်ငယ်ကစစ်တပ်ဘေးမှာနေခဲ့ရတာမို့ သိထားတာတွေလည်းရှိတော့ နောင်ပို့စ်တွေမှာအခန့်သင့်ရင် ထည့်ရေးသွားဖို့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စိတ်သဘောချင်းတိုက်ဆိုင်သူတွေချင်း အသိချင်းဖလှယ်တဲ့အဆင့်လောက်ပဲ မျှော်မှန်းလို့ရမယ်ဆိုတာတော့ သိထားပါတယ်။ မယုံဖို့ အစကတည်းက ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့သူတွေကိုတော့ လုကံ ဝကံ လို့ပဲသဘောထားရတော့မှာပေါ့။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ အထွေအထူးမဟုတ်ပေမယ့် လူ့ကျင့်ဝတ်နဲ့တော့ ဆိုင်ပါတယ်။ လိုင်းတွေခွကျော်ပြီး နာမည်ပျောက်လိုက်ရေးတဲ့ကိစ္စပါ။ ကိုယ်တော်တော်ကြောက်တတ်လှပြီထင်တာ ကိုယ့်ထက်သာသူတွေများတော့လည်း အားပဲရှိရတော့မလိုလို၊ ကိုယ်လည်းနာမည်ပြောင်းရေးရမလိုလိုနဲ့ အင်းလေ ဘဝ.. ဘဝ လို့ပဲစိတ်ဖြေပြီး လမ်းဆက်လျှောက်ရအုံးမှာပါပဲ။
မိသင်္ဂဟအပေါင်း စိတ်ပါကိုယ်ရောက် ထင်တိုင်းပေါက်ကြပါစေ။
September 21, 2010 at 2:34 AM Reply
September 21, 2010 at 2:40 AM Reply
သူရဲကောင်းလိုချီးမွမ်းနေကြတဲ့သူတွေအနေနဲ့ ပိုက်ဆံနဲ့ချီးကျူးနေတာလား ကူညီထောက်ပံပေးနေတာလား? ဒီမိုသမားပြည်ပမှာ ဒေါ်လာသန်းကြွယ်သူဌေးတွေပေါနေတာတောင်မှ ဒီမိုတွေတွက်သူရဲကောင်းဆိုသူရဲ့ အိမ်လေးတစ်လုံးကိုလည်းကြည့်ပါအုံး...ပြုပြင်ပေးဖို့စိတ်မကူးပဲ စကားလုံးလေးတစ်လုံး စာရွက်လေးတစ်ခုပေါ်မှာ ရေးခြစ်လိုက်တာနဲ့ဝတ်ကျေတန်းကျေဖြစ်သွားရောလား..ထောက်ပံ့တဲ့ငွေစက္ကူကိုလည်းကြည့်ပါအုံး စာအိပ်လေးတစ်ခုလောက်လေးနဲ့...
September 21, 2010 at 8:10 AM Reply
သေနတ်နဲ့ ပစ်သတ်သူကို အကြမ်းဖက်သမားလို့ မမြင်ဘဲ ဘာလက်နက်မှ မပါဘဲ အဖြူအစိမ်းဝတ်၊ ဗိုလ်ချုပ်ပုံ ကိုင်ပြီး ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြသူကို အကြမ်းဖက်သူပုံလားလို့ မေးတဲ့ ပထမ Anonymous ကတော့ စိတ်ပုံမှန် မဟုတ်လို့ပဲ ဖြစ်မယ်။
ဒုတိယ Anonymous ပြောတာကို ကျွန်မလည်း တွေးမိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီလိုအခြေအနေ ဖြစ်နေရင် ဒီလို ရှုပ်ချပြောဆိုသလို ပြည်ပက ကူညီလိုက်လို့ ပြည့်စုံလာရင်လည်း တရားမ၀င်ဘူးလို့ ပြဿနာရှာပြီး ကြံ့တွေဖွတ်တွေနဲ့ မြို့ပေါ် လက်နက်ကိုင် သောင်းကျန်းသူတွေကလည်း ပစ္စည်းကိုသိမ်း လူကို အချုပ်ထဲထည့်မှာပဲ မဟုတ်လား။ ဒီတော့ အကူအညီပေးချင်ပေမဲ့ ဘယ်လို သွားပေးလို့ ဖြစ်မလဲ။
ခြင်္သေ့တို့ ကိုမန်းကိုကို ကိုရွှေမန်းတို့မှတ်ချက်တွေအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ခြင်္သေ့ကို နောက်မှ အကြောင်းပြန်ပေးမယ်။
September 22, 2010 at 5:48 PM Reply
မငယ် ဓာတ်ပုံတွေကြားထဲက စာလုံးအနီတွေ နဲ့ ရေး ထားတဲ့ရက်စွဲတွေ က ၀၈၊၀၉တွေဖြစ်နေတယ်လေ
September 23, 2010 at 10:31 AM Reply
ငမူးရေ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ပြင်လိုက်ပြီ။
(VIDEO) - ၁၉-၉-၁၉၈၈ ရက် ရန်ကုန်မြို့လယ်၊ ဗန္ဓုလပန်းခြံဘေးမှာ မြန်မာစစ်တပ်က ကျောင်းသား၊ ပြည်သူတွေကို ဥပဒေမဲ့ အသေ ပစ်သတ်နေပုံ says:
September 20, 2012 at 10:54 AM Reply
ခေါင်းစဉ်ကို နှိပ်ပြီး ၁၉-၉-၁၉၈၈ ရက် ရန်ကုန်မြို့လယ် လူသတ်ပွဲ ဗီဒီယို ကို ကြည့်နိုင်ပါတယ်။)
August 7, 2013 at 11:11 AM Reply